Pentethyl Ester (CAPE) dị na Caffeic Acid (104594-70-9) ≥98% | AASraw
Phenethyl Ester (CAPE) nke dị na Caffeic
/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Phenethyl Ester (CAPE) ntụ ntụ Caffeic Acid
Rating: SKU: 104594-70-9. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) (104594-70-9), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Phenethyl Ester (CAPE) nke dị na Caffeic Acid
Phenethyl Ester (CAPE) nke dị na Caffeic isi agwa
aha: Phenethyl Ester (CAPE) nke dị na Caffeic
Usoro Molecular: C17H16O4
Molekụla arọ: 284.31
Nchekwa Nche: -20 ° C
agba: Gbanyụọ-White ntụ ntụ
Phenethyl Ester (CAPE) Acid Caffeic Acid
Pentethyl Ester (CAPE) Acid Caffeic Acid, 2-phenylethyl (2E) -3- (3,4-dihydroxyphenyl) acrylate, Phenylethyl caffeate; Pentethyl caffeate; Caffeic acid 2-phenylethyl ester; β-Phenylthyl caffeate;
Pentethyl Ester ntụ ntụ na-arụ ọrụ caffeic
Nchebe nke ndị ọrịa megide mmetụta dị iche iche nke chemotherapy na usoro redio na-eme ka mmasị ndị dọkịta na ndị dọkịta na-arịwanye elu. Pentethyl Ester Acid (Caffeic Acid Acid), nke a na-amịpụta site na propolis nke na-emepụta mmanụ aṅụ dị ka ihe na-arụsi ọrụ ike, na-egbochi ihe nuklia na-akpata kB na ụbụrụ micromolar na igosi ike ịkwụsị 5-lipoxygenase-catalysed oxygenation of linoleic acid and arachidonic acid. CAPE ntụ ntụ nwere antiinflammatory, antiproliferative, antioxidant, cytostatic, antiviral, antibacterial, antifungal na antineoplastic Njirimara. Nzube nke nyocha a bụ ịkọwapụta na vidio na in vitro nke CAPE ntụpụ iji gbochie chemotherapy-emetụta na redio na-eweta mmebi na mmetụta dị iche iche na ụmụ anụmanụ na-anwale na iji zụlite ụzọ ọhụrụ maka iji CAPE mee ihe n'omume na-eme ka a ghara ịnwale ya dị ka onye nchebe n'oge chemotherapy na usoro redio.
Pentethyl Ester (Caffeic Acid Acid Acid) bụ ihe na-arụ ọrụ nke propolis, ngwaahịa na-ekpuchi mmanụ aṅụ. Pentethyl Ester ntụpọ Caffeic Acid bụ onye na-emechi ihe na-emepụta ihe nuklia, NF-κB. E gosipụtara ntụ ntụ CAP ka ọ kwụsịlata ụzọ ụzọ lipoxygenase nke arachidonic acid metabolism n'oge mbufụt. Pentethyl Ester nke Caffeic Acid na-egbochi nje HIV-1, na-egbochi mmụba nke mkpụrụ ndụ gbanwere. Ọ na-adọta apoptosis na fibroblasts gbanwere, ma na-emetụta mmegharị EGF nke na-emetụta ma protein kinase C na ornithine decarboxylase.
Nke a bụ ngwaahịa maka usoro Gene Survey. Pịa ebe a iji chọpụta ihe ndị ọzọ gbasara ngwaahịa Gene. Mụtakwuo maka obere obere mkpụrụ ndụ maka ihe ndị ọzọ gbasara nchọpụta na sigma.com/discover-bsm.
A na-enyekwa onyinye a dịka akụkụ nke Sigma's Library of Pharmacologically Active Compounds, nchịkọta akụkọ nke elu-igwe, dị njikere na ihuenyo. Pịa ebe a iji mụtakwuo ihe.
Pentethyl Ester (Caffeic Acid Acid Acid) bụ ihe dị ndụ nke propolis wepụ. Akwụkwọ ndị ahụ na-achọpụta na CAPE ntụ ntụ nwere antimicrobial, antioxidant, mgbochi mkpali, na ụdị cytotoxic. Ebumnuche bụ isi nke isiokwu nyochaa bụ iji ọnụ na-atụle data ndị dị ugbu a gbasara ọgwụgwọ CAPE ntụ ntụ na nsogbu dị iche iche. Ihe nchoputara nke oma na CAPE uzuzu bu polyphenol nke na-arusi oria ogwu na onye adjuvant nke chemotherapy maka ime ka ogwugwu di ike na ime ka o ghara idi ire.
Ịdọ aka ná ntị na ájá Caffeic Phenethyl Ester
Nchịkọta ozi GHS nke ụlọ ọrụ 72 nyere site na ọkwa 3 gaa na CAPE ntụ ntụ C&L Inventory. Enwere ike ijikọ ọkwa ọ bụla na ọtụtụ ụlọ ọrụ.
H315 (100%): Na - eme ka mgbakasị ahụ dị njọ [Ọbụrụ na - agba ume na mkpasu iwe] H319 (100%): Na - eme ka anya mmiri dị njọ [Ịdọ aka ná ntị Mpụ njọ anya / anya mgbakasị] H335 (98.61%): ịṅụbiga mmanya ókè, ọpụpụ nke otu; Nsogbu iku ume iku ume]
Ozi nwere ike ịdịgasị iche n'etiti nkwupụta na-adabere na adịghị emerụ, ntinye, na ihe ndị ọzọ. Onu ogugu percent n'ime nkpughe na-egosi ọkwa nkesa a mara ọkwa site na ulo oru ndi na-enye onodu odachi. Naanị koodu mgbagwoju na oke pasent n'elu 10% ka egosiri.
Usoro Nkwupụta Ntuziaka
P261, P264, P271, P280, P302, P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P312, P321, P332 + P313, P337 + P313, P362, P403 + P233, P405, na P501
Phenethyl Ester (CAPE) nwere ike ịchọrọ ịchọta ọrụ dị iche iche, dịka antimicrobial, antioxidant, mgbochi mkpali, na ihe omume cytotoxicity. Achọpụtara nchọpụta n'ọdịnihu banyere ọrịa na-egbuke egbuke nke CAPE na-atụ anya ya ma ọ bụrụ na a ga-eji ya dịka onye na-agwọ ọrịa. Enwere otutu akwukwo n'ebe ufodu uzo ozo, ma ebe ndi ozo di obere ma o bu na achoputaghi ya; Ya mere, nyocha ọzọ iji jiri polyphenol nkịtị na akụnụba maka ọgwụgwọ kachasị mma maka ọrịa na-achọ ma nye ya.
Akwukwo ihe omumu di iche iche na vitio na otutu ihe di iche iche nke anu aru ka ekwuputara maka CAPE uzuzu, ma ihe omuma ha adighi ama. Ọ nwere antimitogenic, anticarcinogenic, mgbochi mkpali, na immunomodulatory Njirimara na vitro. Nnyocha ọzọ gosikwara na CAPE ntụ ntụ na-egbochi nnukwu mmeghachi ahụ na nsogbu ndị na-emetụ n'ahụ n'ime vitro. A hụkwara mmetụta a na-emegide ọrịa cancer mgbe a na-emeso ụmụ oke anụ na bee propolis na kpughere TPA, chemical nke na-akpụ akpụ papillomas. CAPE ntụ ntụ belata ọnụ ọgụgụ nke papilmas.
N'ịtụle akwụkwọ ndị bu ụzọ, CAPE ntụ ntụ nwere ike ikwu ka ị nwee ọrụ dịgasị iche iche, dịka antimicrobial, antioxidant, mgbochi mkpali, na ihe omume cytotoxicity. Achọpụtara nchọpụta n'ọdịnihu banyere ọrịa na-egbuke egbuke nke CAPE na-atụ anya ya ma ọ bụrụ na a ga-eji ya dịka onye na-agwọ ọrịa. Enwere otutu akwukwo n'ebe ufodu uzo ozo, ma ebe ndi ozo di obere ma o bu na achoputaghi ya; Ya mere, nyocha ọzọ iji jiri polyphenol nkịtị na akụnụba maka ọgwụgwọ kachasị mma maka ọrịa na-achọ ma nye ya.
Pentethyl Ester ntụ ntụ Caffeic Acid
Maka usoro ka ukwuu (N'ime 1kg) nwere ike zipụ na 3 ụbọchị ọrụ mgbe ịkwụ ụgwọ.
Caffeic Acid Phenethyl Ester ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Caffeic Acid Phenethyl Ester ntụ ntụ; zụta CAPE ntụ ntụ si AASraw
Cortexolone 17a-propionate ntụ ntụ
Hydralazine HCL ntụ ntụ
Ajuju Ajuju Banyere Sunitinib Malate 丨 AASraw